TQC- I-Bookprintingchina uhlelo lokulawula ikhwalithi ephezulu.-I-Blog-Book Printing China
TQC- I-Bookprintingchina uhlelo lokulawula ikhwalithi ephezulu.
isikhathi: 2017-07-12 Okuhamba phambili kwe-: 269
TQC: Uyini umqondo? Ukulawulwa okuphelele kwekhwalithi ukulawulwa okuphelele kwekhwalithi, ebizwa nge-TQC.
I-TQC yokuPrinta iNcwadi China: Kudinga wonke umuntu ukuthi abhekele ikhwalithi yomkhiqizo, thola izinkinga zekhwalithi ngesikhathi, futhi uxazulule izinkinga ekuqaleni. Ngokungafani namanye amabhizinisi, singumkhiqizi osebenza ekuphrinteni nasekuhlanganiseni izincwadi kanye nama-periodicals. Ngokusho kokucabanga okungekho emthethweni, mhlawumbe ayikho ifektri yokuphrinta engqondweni yakho ezophakamisa ukuthi ukulawulwa kwekhwalithi kusetshenziswe ukwenza. I-Bookprintingchina ikwenza lokhu ngaphandle komzamo.
Empeleni, umqondo wokuthuthuka osezingeni eliphakeme onjalo uvela kumabhizinisi aseJapan, abasebenzi banelungelo lokumisa ulayini wokukhiqiza lapho bethola izinkinga zekhwalithi. Ngoba omunye wemibono yokuphathwa kwekhwalithi isiyonke ukuthi ukuqina kwekhwalithi kubaluleke kakhulu kunokukhipha okuphezulu.
Ukugcinwa kwe- ukuphrinta izincwadi nekhwalithi yokubopha ibaluleke ngaphezu kokukhipha okuphezulu efemini yethu. Ngakho-ke, ku-TQC, kugcizelelwa kakhudlwana kuwo wonke amasheke abasebenzi, leyo, umsebenzi ngamunye uqinisekisa ukuthi azikho izingxenye ezinesici ezizongena kwinqubo elandelayo.
Ngokwesibonelo, yethu ukuphrinta kwencwadi eqinile kanye nenqubo yokuphrinta izincwadi; cabanga ukuthi wonke umsebenzi osemsebenzini wokuphrinta angaqinisekisa 100% ukuthi amashidi afanelekayo kuphela afaka inqubo elandelayo yokugoqa, okungukuthi, inqubo yokusonga ingathola 100% izingxenye ezingafanelekile ngemuva kokuphothulwa kokucutshungulwa. (Lapha, cabanga ukuthi kukhona ishidi elilodwa elingafaneleki.) Ukugoqwa okufanelekile nokondla ukugoqa okusele okufanelekile (ukuthatha i-114-1 = 113) kunqubo yokukhiya intambo; ngokufanayo, kuphela 108 izingcezu ezifanelekile zoboya zivunyelwe ukungena kuzipikili ezinoqwembe oluqinile / lweglue ngemuva kokuthi inqubo yokuvala intambo isiqediwe, futhi kukhethwa izincwadi ezinhlanu ezingafaneleki zoboya; ngokufanisa, ukukhiqizwa kokugcina kwabasebenzi abanoqwembe oluqinile kule nqubo kuyatholakala. Imikhiqizo efanelekayo yile 100 izingcezu.
I-Bookprintingchina Isebenza ekusetshenzisweni kokuphathwa kwekhwalithi ye-TQC ngaphansi kwe- ukuphrinta kwencwadi enzima izinga leziqu ezisezingeni elizinzile futhi lihle kakhulu. I-Bookprintingchina ngokuqhubekayo yenza ama-node wokulawula ikhwalithi kunqubo yokuphrinta nokubopha yokushicilelwa ngakunye. Funda ngathi, www.bookprintingchina.com
Okwangaphambilini Ikhasi : I-BPC(Ukubhebhana.com)-22 ukuphrinta kwezincwadi ngobuhlakani
Ikhasi Elilandelayo : Akekho